> Resource > Talooyin > Wedding Gift guuradii - Dooro Wedding ee Best Guuradii Gift
Guuradii arooska A had iyo jeer waa dhacdo xusuus leh labo iyo astaan ​​lamaanahan ay ka go'antahay iyo jacayl sii midba midka kale. Hadiyado Guuradii waa qayb muhiim ah oo u dabaal sanadlaha arooska dabbaaldegyada, oo muujinaysa jacaylka aad iyo fiiro gaar ah u xaaskaaga. Markaas waxa arooska guuradii hadiyadda midig sano inay si fiican u gaadhsiin dareenkaaga? Qaar ka mid ah fikradaha hadiyad guuradii arooska kaamil ah hoos ayaa loo bixiyey inuu kaa caawiyo inaad doorato hadiyad guuradii arooska weyn u guuradii aroos aad. Hal sii gacaliyahaagii hadiyad taabashada isaga wada xusuusin doonaa / iyada oo aad xusuus macaan!
Qaybta 1. gaar ah iyo hadiyado guuradii arooska shakhsi
Qaybta guuradii 2. Wedding hadiyado by sano
Qaybta 1. gaar ah oo shakhsi guuradii arooska fikrado hadiyad
Hadiyado guuradii arooska shakhsiga ah oo gaar ah ay u muujiyaan lamaanahaaga in aad daryeesho isaga / iyada ku saabsan. Haddii aad su'aal qabto waxa laga yaabaa in arooska shakhsiga hadiyadda guurada ugu wanaagsan ee aad jeceshahay, kadibna waxaad ka fiirsan laga yaabaa hadiyad u sawirka aad daqiiqad xusuus wada. A gaar ah hadiyad guuradii arooska shakhsi muujinaysaa in aad qiimaysid oo ku qarisaan naftiina aad xiriirka, si mar kaliya ku qaataan si ay u soo bandhigaan hadiyad guuradii la xiriiri shakhsi u dabaal-guuradii aad!
1. guuradii arooska Shakhsiga hadiyad: filim guuradii guriga
Abuuritaanka sawir aroos & movie video la sawiro iyo heeso aad sidoo kale waa fikrad wanaagsan waayo, laaluushku guuradii Bixinta. DVD Wedding duubey waa keepsakes qaali ah. Adigu weligaaba ilaalin karaa daqiiqado aad xusuus by jeestay jecel aad sawirada aroosyada galay gaar ah soo duubey arooska on DVD qaar ka mid ah software DVD slideshow .
Buug xasuus guuradii: hadiyad 2. guuradii arooska Shakhsiga
Isku dar buug album sawir iyo xusuus ah la software ah scrapbooking digital. Buug sawir Tani waxay hubaal noqon doontaa dhax ah qiimo labo kasta. Ilaali noloshaada guurka ee buugaagta sawir oo had iyo jeer kuwa xusuus macaan ee wadnaha!
3. Shakhsiga guuradii arooska hadiyad: waxyaabaha xardhan
A shakhsi fikrad hadiyad guuradii arooska caanka ah waa inuu xaradh wax aad rabto inaad tiraahdo ku hadiyado, sida dusheeda of galaas, jaldiga qoryo ah buug ka. Laga soo maro si ay lacag ah, maqaar dahabka, weedh ama magaca la saari karo waa hadiyad guuradii arooska weyn.
Arooska 1aad fikrado hadiyad guuradii
Guuradii arooska hore laba A waxa uu ka dhigan gabagabeeyo sanadka ah ee la qabsiga la taaban karo sida lamaanahan guurkiisii ​​helo si uu u ogaado mid kale oo ka wanaagsan oo degtaa galay nolosha guurka, sidaas guuradii koowaad waa xaflad weyn. Waxaa jira qaar ka mid ah fikradaha hadiyad guuradii arooska ugu horeeyay sharaf munaasabad tan gaarka ah.
Tigidhada: Inuu gato tigidhada qaar ka mid ah lagu dheeldheel park, riwaayad, festival, museum, play ama dhacdo ciyaaraha Guuradii warqada.
> card arooska waxbuu: Samee kaarka shakhsi arooska ama jadwal la sawiro aad wada isticmaalaya kaarka sawirka oo dhan-in-ka mid ah iyo software sawrirrada in uu korka markii ugu faraxsanahay marka aad samayn midba midka kale.
> sawrirrada Wedding: Iyada oo software scrapbooking digital arooska wanaagsan iyo qaar ka mid weyn fikrado sawrirrada arooska , samaynta sawrirrada warqad kasoo muuqdaan sawiro oo aad u samaysatay inaad xaaskaaga waa hadiyad macno leh .
Arooska 2aad fikrado hadiyad guuradii
Suufka iyo Shiinaha waa inaad hadiyado wanaagsan u guuradii arooska 2aad oo hoos ku qoran waxaa ka mid ah guuradii arooska fikrado hadiyad 2aad xiriira suuf iyo Shiinaha.
> Xabbadood Qurxinta:. Items Qaar ka mid ah madaxtooyada ka kooban dhar suuf ka caawin doonaa in ay soo bandhigaan jacaylka aad u qoto dheer
> Lafaha maacuun Shiinaha: Gift naagta la lafta maacuun Shiinaha. Lafaha koobabka Shiinaha, tumeen, maddiibadihii iwm la hibo karo.
> Shiinaha Jewelry, Jewelry oo laga sameeyey Shiinaha ayaa sidoo kale lagu hibo karo, sida hilqado, silsilad, dugaagado, iwm
Arooska 3aad fikrado hadiyad guuradii
Guuradii saddexaad ee lagu xuso by maqaar dhaqan. Sida laga soo xigtay calaamado guuradii madarad oo casri ah ama galaas waa hadiyad muddo 3 sano ah ee guurka.
> Bac / kiiska Leather laptop: cover maqaar A xaqiijin doonaa laptop qaataha ah ee lagu hayaa markabka-qaab.
> haysta baasaboorka Leather: haysta baasaboorka maqaar A waa hadiyad guuradii arooska fiican 3aad kuwa jeclahay safarka.
> farshaxan Glass: Wixii fancier ah hadiyaddaada ku habboon ninkeedii diyaarin karin in naqshad muraayad u sameeyey inuu naagtiisa.
Arooska 4aad fikrado hadiyad guuradii
The hadiyad guuradii arooska afaraad dhaqanka waa miraha iyo ubaxa. Hadiyad casriga ah waxaa weeye dhar, Xariir, ama nylon. Dooro hadiyad guuradii arooska ugu fiican afraad ee xaaskaaga.
> Fruit iyo Ubax, ubax ayaa si rasmi ah u guuradii afaraad waa Geranium ah. Waxaad ka iibsan kartaa geraniums ay u aasaan gurigaaga ka baxsan. Haddii qofka aad jaalka tihiin ku raaxaystaa beerta, markaas taasu waa hibo kaamil ah.
> linen / xariirta / nylon: Tixgeli iibsigu marada wanaagsan oo linenka ah casho ka taataabtay. Markaas guurto qolka hurdada oo ay jiraan sheets Xariir cusub sugaya xaaskaaga.
> Jewelry, Dhagaxii kuwa rasmiga ah ee guuradii afaraad waa tobasiyos buluug ah oo leh kale ka raqiisan isagoo zircon buluuga ah. Fiiri iyada sanduuqa dahabka si ay u arkaan noocyada iyo hanaan ee dahabka iyadu ay jeceshahay iyada iyo kuwa soo iibsadaan.
Arooska 5aad fikrado hadiyad guuradii
Guurada arooska 5aad, guuradii qoryihii waa sanad guuradii ugu horeysay ee guul weyn ka guurkaaga. Iyo sidoo kale aad dooran kartaa hadiyado qoryo la xiriirta qaar ka mid ah.
> Click here sawir Wood:. Hayso jir ah shakhsi sawir qoryo si ay ugu dabbaal arooska 5aad aad
> sawir Wood albums: Waxaa jira sawir albums heli karo in hore iyo daboolida dib ka samaysan yihiin alwaax. Samee sawrirrada la dareenka iyo wada dabool dhogor idaad ah gelin.
> Wood sanduuqa keepsake, Waxaad samaysataa sanduuq keepsake leh qaab ku haboon oo size ku xaradhaa xaradhka cadeyntaada jecel on in la siiyo xaaskaaga la yaab leh.
Arooska 10aad fikrado hadiyad guuradii
The fikrad dhaqanka guuradii arooska meelood Hadyadiina qasacad ama aluminium, liiska hadiyad casriga ah waxaa ka mid ah dheeman. Halkan waxaa ku qoran fikrado arooska 10aad hadiyad guuradii.
> Bakeware Aluminum ama cookware: bakeware Aluminum ama cookware waa fikrad hadiyad guuradii weyn in la siiyo laba jecel yahay in cunto karinta iyo la dubayo guriga ama madadaalo.
> Art / naqshad: Art ama farshaxan abuuray qalabka iyo waxa daasadda ah ama aluminium la siin karaa si ay u isticmaalaan in ay guriga.
20 iyo guuradii arooska fikrado hadiyad 25-
Guurada 20aad ee arooska oo 25-jira Dhacdooyinka, sax? Markaasuu shat yihiin qaar ka mid ah hadiyado guuradii arooska wanaagsan?
> DVD Photo show: saar sawirada aad nolosha ku faraxsan yahay sanadihii la soo dhaafay ku DVD ah, ku dar heesaha jacaylka iyo saamaynta kale ee wadaagga ah ee internetka ama daawashada TV-ga. Waxaad badbaadin kartaa sanado badan. Iyada oo loo wada dhan-in-ka mid ah DVD software sameynta filimada , waxaad samayn kartaa slideshow DVD arooska si ay u sameeyaan guuradii arooska khaaska badan abid ah!
> collage geed sawir Qoyska: Samee fudud collage qoyska geed sawir xusuus qoyskaaga.
> Taariikhda aasaasay qoyska huurada guriga: fiican ee laba-guuradii in uu leeyahay guriga oo uu leeyahay qiyam adag qoyska. Huurada ayaa lulataa ka baxsan gurigooda, iyadoo taariikhda ay guursatay ee hore.
Aroos 30-fikrado hadiyad guuradii
Dhaqan ahaan, Jawhar jira hadiyado guuradii soddonaad ee arooska, iyo dheeman ayaa doorashada ugu sareysa jeer oo casri ah.
> Album Photo: album A sawir la sawiro aad ka maalinta arooska aad wakhtiga la joogo ka dhigi doonaa a album xusuus gaar ah. Hubi in aad doorato software sawrirrada waa u fududahay in ay weli isticmaalaan awood badan ah.
> Dabaaldegga ah: Hosting xisbiga guuradii ah sidoo kale waa hadiyad weyn, oo waxay isu keentaa saaxiibadaa iyo qoyskaaga inay ku raaxaystaan ​​xiiso badan.
> Malabka Labaad labadii: A Malabka labaad waa fikrad hadiyad weyn guuradii arooska labo ayaa wada muddo 30 sano ah. Wada raaxaysta noloshaada iyo kaag iyo jeer ku faraxsan yahay!
> dahabka Diamond: Diamonds waa shayga casriga ah ee la xidhiidha guuradii soddonaad ee arooska. Habka ugu fiican ee la siiyo dheeman waa in qaab dahabka dheemman. Hadiyad A noqon kartaa kuul, iyo hilqado, la surto oo ah ama cufflinks isaga.
Arooska 40aad fikrado hadiyad guuradii
Ruby waxaa ugu xusay sannadkii 40aad ee guurka. Waxaa la rumeysan yahay in luul leeyihiin muddo dheer olol gudaha sida hamiday laba ee midba midka kale ka dib markii uu 40 sano ka wada. Iidda Oo aad indhahaaga ku soo socda guuradii arooska fikrado hadiyad.
> Ubax: The ubax ugu fiican ama sanad guuradii 40aad yihiin nasturtium beerta. Badiilka ah waa fuulitaanka sardiyos midab kacay.
> dahabka Ruby: Sii laba tallaabadaas dahabka lacagtii sheeegateen oo yaaquud la yidhaahdo.
CD> Audio: Soo ururinta heeso ka qabno in ay guur galay CD Audio ah. Haddii aad ka heli kartaa waxa songs arooska iyo ugu cadcad shakhsi yihiin, si wanaagsan ugu.
50aad - 60aad fikrado hadiyad guuradii aroos
Marka aad hesho si aad guuradii kontonaad ama sixtieth, aad eegto nolosha wax yar ka duwan, iyo qalab wax waliba u muhiim ah sidii ay ahaayeen marka aad yaraayeen, si dadaal kasta oo had iyo jeer ka mahadnaqayo markii la siiyo laba hadiyad guuradii kontonaad ama sixtieth. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin lagu hadiyad labo on ama sixtieth guuradii arooska.
> Ma rinjiyeynta ama caricature dhigay ka mid ah sawir arooska
> Halkii buug martida ah, iibsan sanduuqa music ah oo ka buuxisaan fariimaha jacaylka ku qoran dahab ama warqad handmade qoyska iyo saaxiibada
> Waa maxay shakhsi ahaan iyaga caawin kara? Waxaad kiraysan kartaa baabuur iyaga? Kharashka jikada ama dayactirka kale guriga?